Iindaba -Izixhobo zemaski yomatshini wokubamba kagesi ngokubamba ukusebenza kwayo kunye nomgaqo wokusebenza
Izixhobo zomatshini wemaski clutch ye-clutch yeempawu zayo zomsebenzi kunye nomgaqo wokusebenza
Iimpawu zokusebenza kunye nomgaqo osebenzayo we-clutch ye-electromagnetic yezixhobo zomatshini wemaski. I-clutch ye-electromagnetic yinto ebalulekileyo kwimveliso yemaski. I-clutch efanelekileyo ye-electromagnetic inokuphucula ukusebenza komatshini we-mask kwaye igcine abasebenzi beenkampani kunye neendleko zezinto eziphathekayo. Ukuba ufuna ukukhetha elungileyo iklasikhi ye-Electromagnetic, kufuneka siyiqonde ukusebenza kweempawu zayo kunye nomgaqo wokusebenza.
Izixhobo zomatshini wokugcina amandla ombane we-clutch ukusebenza kweempawu zawo
Xa okwangoku kuvuliwe, amandla ombane aveliswayo emva koko kuyabandakanyeka kwipleyiti "yezixhobo". Iklatshi ikwimeko yokuzibandakanya. Xa okwangoku kunqunyanyisiwe, iikhoyili ayinamandla kwaye i "armature" ivuliwe ivulekile, kwaye i-clutch ikwimeko yokukhutshwa.
1. Indibano elula kunye nolondolozo: Yeyesimo esimileyo sekhoyili yentsimi yemagnethi efakwe kwibhola, kungoko kungekho mfuneko yokukhupha umbindi ophakathi okanye usebenzise ibrashi yekhabhoni, kwaye kulula ukuyisebenzisa.
2. Ukuphendula ngesantya esiphezulu: Kuba luhlobo olomileyo, i-torque idluliselwa ngokukhawuleza, kwaye amanyathelo afanelekileyo anokufezekiswa.
3, ukuzinza okunamandla: ukusasaza ubushushu obuhle, kunye nokusetyenziswa kwezinto ezihambele phambili, nokuba iphindaphindwe kakhulu kunye nokusetyenziswa kwamandla amakhulu, ihlala ixesha elide.
4, isenzo sinyani: ukusetyenziswa kwemithombo emile okwipleyiti, nangona kukho ukungcangcazela okunamandla akuyi kuvelisa ukomelela okuhle, ukuhlala ixesha elide.
Umgaqo osebenzayo we-clutch ye-electromagnetic kumatshini womaski: indawo esebenzayo kunye nenxalenye eqhutyiweyo ye-clutch ye-electromagnetic zisebenzisa ukungqubana phakathi kweendawo zonxibelelwano, okanye ukusebenzisa ulwelo njengesixhobo sokuhambisa (ukudibanisa i-hydraulic), okanye ukusebenzisa ukuhambisa ngemagnethi (iklasikhi ye-electromagnetic clutch Ukudlulisa i-torque ivumela abo babini ukuba bohlukane okwethutyana, kwaye banokuzibandakanya ngokuthe ngcembe, kwaye la macandelo mabini ajikeleziswa ekuphenduleni omnye komnye ngexesha lokuhambisa.
Umgaqo osebenzayo we-clutch ye-electromagnetic yezinto zokusebenza kumatshini womaski
Uhlalutyo lomgaqo osebenzayo we-clutch ye-electromagnetic yezixhobo zomatshini wemaski: Isiphelo se-spline shaft sokuqhuba sixhotywe ngeplate esebenzayo yokukhuhlana, enokuhamba ngokukhululekileyo kwicala le-axial. Ngenxa yonxibelelwano lwe-spline, iya kujikeleza nge-shaft yokuqhuba. Ipleyiti yobundlobongela eqhutyiweyo kunye nepleyiti yokuxubana kokuqhuba zigxunyekwe, kwaye isahlulo se-convex somda wangaphandle sinamathele emkhonweni olungiswe ngegiya eqhutyiweyo, ke ipleyiti yokuxabana eqhutyiweyo inokulandela izixhobo eziqhutywa, kwaye ayikwazi kujikeleza xa shaft uqhuba. .
Xa i-coil inikwe amandla, iipleyiti zochuku zitsaleleka kumbindi wentsimbi, kwaye isixhobo somatshini siyatsalwa, kwaye ipleyiti nganye yokukhuhlana icinezelwe ngokuqinileyo. Kuxhomekeka kubambene phakathi inkosi kunye neepleyiti zochuku eqhutywa, izixhobo eqhutywa ajikeleza shaft ukuqhuba. Xa i-coil icinyiwe, imithombo yekhoyili efakwe phakathi kwamacwecwe okuxubana angaphakathi nangaphandle abuyisela izixhobo kunye neepleyiti zochuku, kwaye iklatshi ilahlekelwa sisiphumo sokuhambisa torque. Isiphelo esinye sokufaka i-coil igalelo lamandla e-DC ngokusebenzisa ibrashi kunye neringi yesiliphu, kwaye elinye icala linokusekwa.